January 16, 2021 - Achawlaymyar
January 16, 2021 by Achawlaymyar
အသည်းကွဲဖူးတဲ့သူလေးတွေက နောက်တစ်ခေါက်ချစ်ရမှာ သိပ်ကိုကြောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ ကြောက်စရာခံစားချက်လို့ပဲ တရားသေမှတ်ထားလိုက်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်ချင်တော့တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်နေကြတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်တောင် သူတို့တွေတော့ အချစ်ကြောင့်နာကျင်မှုတွေကို ခံစားနေရရှာတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်လာပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် အသည်းကွဲပြီး အချစ်ကိုကြောက်နေတဲ့သူလေးတွေဖတ်ဖို့ စာလေးတစ်စောင်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…။ တစ်ဘ၀လုံးမှာတစ်ခါပဲချစ်မှာလား လူတိုင်းက ဘ၀မှာအချစ်ကို အကန့်အသတ်မရှိခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ သင်ကရော တစ်ခါပဲချစ်ပြီး တစ်ဘ၀စာလုံလောက်သွားပြီလား လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ပါဦး။ စောစောစီးစီးအရှုံးပေးလိုက်တော့မှာလား အချစ်ဆိုတာ အရွယ်ရောက်တဲ့သူတိုင်း ၀င်ကစားကြတဲ့ ကစားပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သင်က ဒီကစားပွဲမှာ စောစောစီးစီးအရှုံးပေးလိုက်ပြီလား။ တစ်ခါအသည်းကွဲရုံနဲ့ ကျောခိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် ပိုပိုလှတဲ့အချစ်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဆိုးရွားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကြောင့်တစ်ဘ၀လုံးအချစ်မရှိဘဲဖြတ်သန်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလား ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ အကောင်းဆုံးကိုတွေ့ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါတယ်။ အချစ်မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ပထမဆုံးအသည်းကွဲကြတာ လူတိုင်းနာကျင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း နောက်ထပ်အချစ်ကိုမရှာတော့ဘဲ ဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုရင် တန်ရဲ့လားလို့။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျောခိုင်းထားမှာလား။\_ လူတစ်ယောက်ကြောင့်အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာ ဒီဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကုသပေးမယ့်သူတစ်ယောက်နဲ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက် … Read more
ကောင်လေးတွေ သဘောကျတာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လှပမှုမဟုတ်ဘဲ ဒါလေးတွေပါတဲ့
မိန်းကလေး လှတာလေးတွေ တွေ့ရင် ကောင်လေးတွေ ကြိုက် တတ်ကြတာ မှန်ပေမယ့်လို့ တကယ်တမ်း ကောင်လေးတွေ ကြွေရတဲ့ မိန်းကလေး ပုံစံလေးတွေလည်း ရှိနေ ပါသေး တယ်တဲ့ ။ ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့မိန်းကလေး စကားပြောလိုက်တိုင်း၊ လှုပ်ရှားသွား လာလိုက် တိုင်း ဘယ်လိုပုံ စံပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကိုကြည့် လိုက် တာနဲ့ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိနေတဲ့ မိန်းကလေး မျိုးဆိုရင် ကောင်လေးတွေ သဘောကျတာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လှပမှုမဟုတ်ဘဲ ဒါလေးတွေပါတဲ့ ရုပ်မ လှလည်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပြီးပြည့် စုံမှုမရှိနေ ရင်လည်း ကြည့်လို့ ကိုကောင်းနေရော။ ဒီလို မိန်းကလေးမျိုး ကို ကောင်လေးတွေက အရမ်းကြွေတတ်ကြ ပါတယ်တဲ့ ။ အတွေးအခေါ် ရင့်ကျက်တဲ့မိန်းကလေး စကားပြောကြည့် … Read more
သူနဲ့အိပ်ပြီးလို့ မသန့်တော့ပါဘူး ဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန် မဆိုင်သူများမဖတ်ရ
သူနဲ့အိပ်ပြီးလို့ မသန့်တော့ပါဘူး ဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်..။ မဆိုင်သူများမဖတ်ရ..။ ကောင်းပါပြီ မပြောခင်ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ပြောပြတဲ့လူအကြောင်းကိုသိခြင်းဟာပြောမယ့် စကားကို ပိုပြီးလေးနက်စေတယ်ထင်မိလို့ပါ ကျွန်တော် Minctionary ပါ။ ဒီကလောင်နာမည်နဲ့အတူ နာမည်ကြီးခဲ့တာက ပွင့်ကြေဖတ်ကြွေဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေပါ။ မိန်းကလေးတွေဖက်က အလိုမလိုက်ဖို့ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်မြှင့်ဖို့အကြောင်း ယောကျာင်္းယုတ်တွေအကြောင်း အသိပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအကြောင်းတွေဘဲအပ်ကြောင်းထပ်ပြီး တစ်ရာဖိုးသုံးပုဒ် stupidity တွေဘဲဖြန့်မိသလိုဖြစ်မှာစိုးတာရယ်။ ဘဝမှာအခက်အခဲဆုံးကာလဖြစ်ခဲ့ရတာတွေရယ်။ လာတိုင်ပင်ကြတဲ့လူအများစုရဲ့ဇာတ်လမ်းပေါင်းစုံကြားထဲမှာ စိတ်တွေညစ်ညူးလာတာတွေရယ်ကြောင့် ဆက်မရေးဖြစ်သေးတာပါ။ ပြီးတော့ Page မှာတင်တိုင်း ကိုယ့်အကောင့်ကိုလူမသိစေဘဲ page သက်သက်သာတင်ပါတယ်။ တကယ်၍သာ အကောင့်နဲ့တွဲပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း ဆယ်လီ ဆယ့်တစ်လီ တစ်ဦးဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ စပြောရအောင် ကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးက သူနဲ့အိပ်ပြီးလို့မသန့်တော့ပါဘူး ဆိုတာကိုဘဲ။ အဲ့ဒါကဘာမသန့်တာကိုပြောချင်တာလဲမသိဘူး။ HIV ကူးလာလို့လား … Read more
မနေ့ည ၈နာရီကျော်ကျော်လောက်က သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲ ဝင်ခိုင်းတယ်ဗျာ
မနေ့ည ၈နာရီကျော်ကျော်လောက်က ကျနော်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ သောက်နေကျ ဆိုင်ထဲကို ဝင်လိုက်တယ်….. ထိုင်ခုံက မရှိတော့ ကိုရင်လေး ထိုငိနေတဲ့ စားပွဲမှာပဲ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ် စားပွဲထိုးကောင်မလေးက ကျနော့်အတွက် …. လက်ဖက်ရည်ခွက် ချပေးနေတုန်း ကိုရင်လေးက မေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင် မှာထားတာ ကြာပီလေ မရသေးဘူးးလား တဲ့… ကျနော်လည်းးမနေနိုင် မထိုင်နိုင် မေးလိုက်မိတယ်…. ကိုရင်က ဘာမှာထားတာလဲ လို့….. ချိုစိမ့်နဲ့ ပဲနံပြား မှာထားတာ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်….. ကိုရင်က ဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေ ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့….. အခုထိ မရသေးဘူးး အမေကမျှော်နေတော့မှာပဲ…. သူက ပြန်ဖြေတော့… ကျနော်သောက်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဖိုးရယ် ကိုရင် ဟာရယ် ပေါင်းရှင်းလိုက်တယ်….. ပြီးတော့ တပည့်တော် ကိုရင့်အမေဆီကို လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ် ….. တပည့်တော်မှာ … Read more
လက်မှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တူသယောင် ရှိပေမယ့် သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် ကွဲပြားပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ လက်မမှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်း၊ အရစ်ကြောင်းလေးတွေကလည်း … သူတို့ရဲ့ ချစ်သူ မိန်းကလေးအပေါ် ထားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ဖော်ပြပေးနိုင်တာကြောင့် ဖတ်ကြည့်ဦးနော်… ယောက်ျားလေး ရဲ့ လက်မ မှာရှိတဲ့ အရစ်အကြာင်းလေးဟာ (A) ပုံစံအတိုင်း လက်မရဲ့ ပထမအရစ်အရှည်က ဒုတိယအရစ်ထက် ပိုရှည်တယ်ဆိုရင် သစ္စာတရား ကို လက်ကိုင်ထားသူ ဖြစ်ပြီး လက်တွဲဖော်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို ဦးစားပေးတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွဲဖော်ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းကို ချစ်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေး ရဲ့ လက်မ မှာရှိတဲ့ အရစ်အကြောင်းလေးဟာ (B) အတိုင်း လက်မရဲ့ပထမအရစ်နဲ့ ဒုတိယအရစ်ဟာ အရှည်တူတူပဲဆိုရင်တော့ တည်ငြိမ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်အတွက် … Read more
နာမည်ကိုသိရုံနှင့် စိတ်ဓါတ်ကို သိနိုင်အောင် တွက်နည်း……
ဆံပင်က ဒုတိယမျက်နှာဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဆံပင်ပုံစံကကိုယ်နဲ့မလိုက်ရင် လုံးဝမလှတာလည်း အားလုံးအသိပါပဲ။ ဆံပင်အရှည်ထားချင်ပေမယ့် စိတ်မရှည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ တစ်လအတွင်း ဆံပင်ရှည်လွယ်ပြီးတောက်ပြောင်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) မကြာခဏအဖျားတိပေးပါ ဆံပင်အဖျားလေးတွေကို မကြာခဏတိပေးတာက ဆံပင်ရဲ့မကျန်းမာတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆံပင်ကိုကျန်းမာတောက်ပြောင်တဲ့အသွင်မျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ (၂) သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ပေါင်းတင်ပါ ဆံပင်ရှည်လွယ်ချင်သူတွေအနေနဲ့ သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကို အတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိတ်ပြီးအရည်ညှစ်ပါ။ ရလာတဲ့အရည်ကို သံလွင်ဆီအနည်းငယ်နဲ့ရောပြီး ဦးရေပြားနဲ့ဆံပင်အနှံ့ရွှဲနေအောင်လိမ်းပေးကာ နာရီဝက်လောက်ကြာရင် ခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းကို တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ပေးရင် တစ်လကြာတဲ့အခါ ဆံပင်သိသိသာသာရှည်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ (၃) ခေါင်းလျှော်တိုင်းပေါင်းဆေးသုံးပေးပါ ခေါင်းလျှော်တိုင်းဆံပင်ပေါင်းဆေးသုံးပေးတာက ဆံသားခြောက်သွေ့တာ၊ ဆံပင်တွေညှိပြီးပြတ်တာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်ပိုရှည်အောင် အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလျှော်တိုင်းဆံပင်ပေါင်းဆေးကိုမဖြစ်မနေသုံးပေးပါ။ (၄) သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံတဲ့နည်းကိုသုံးပါ ဆံပင်ရှည်လွယ်ချင်သူတွေက ဆံပင်နဲ့ဦးရေပြားကို တတ်နိုင်သလောက်အပူမထိအောင် ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ တဘက်နဲ့ရေစင်အောင်သုတ်ပြီး သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံတာက အကောင်းဆုံးပါ။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သေသေချာချာလိုက်နာပြီး … Read more
ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ.. အမျိုးသမီးများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်
ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ.. အစွန့်ပစ်ခံ မိန်းမသားတို့၏ ဘုန်းကံဆိုတာ ယောက်ျား ဖြစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ချစ်သူကထားခဲ့လို့ ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်းယူသွားလို့ဖြစ်စေ …. အပြစ်ရှာ ထွက်ခွာလို့ဖြစ်စေစွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမ တချို့ ဘဝ ပျက်မတတ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်….အမှန်က ပျော်ရမှာပါလက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်စွာပျော်နေရမှာပါ…. ကိုယ်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတုန်း သန်စွမ်းနေတုန်း ရှာဖွေနိုင်တုန်းမှာ သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် ကိုယ့် တန်ဖိုး နားမလည်တဲ့လူရဲ့ ဘေးနားမှာနေပြီး …. အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဖြတ်သန်းရ ခြင်းထက် နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းမဲ့စွာ ဘဝ ကိုလွတ်လပ်စွာ တည်ဆောက်ရခြင်းက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ရင် ဒီမိန်းမဟာ ပျော်သင့်ပါတယ်… တခါက ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးမှာ သမီး(၃)ယောက် ရှိသတဲ့….ဘုရင်ကြီးက သမီးတော် တို့ ဒီလိုနေနေရတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးတဲ့အခါ …. သမီးအကြီး (၂)ယောက်က”ခမည်းတော် ကျေးဇူးကြောင့်….”လို့ … Read more
နေ့နာမ် မတည့်တဲ့ စုံတွဲလေးတွေ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေစေဖို့
ဓမ္မာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ အတွဲလေးတွေ လက်ထပ် မိရင် နေ့ နာမ်မတည့်တဲ့ စုံတွဲလေးတွေ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေစေဖို့ နေ့နာမ် မတည့်တဲ့ စုံတွဲလေးတွေ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေစေဖို့ *ဓမ္မာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ အတွဲလေးတွေ လက်ထပ်မိရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတာ၊ စီးပွါးမတက်တာ၊ ကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်လို့လည်း အယူရှိပါတယ် *သမီးရည်းစား ချစ်သူဘဝမှာ ဘာနေ့သား၊ ဘာနေ့သမီး ဆိုတာတွေက သိပ်အရေးမကြီးပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးအတွက်ကတော့ နေ့နံတွေက အရေးကြီးလှပါတယ်။ မြန်မာ အယူအဆမှာတော့ ဓမ္မာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ ဆိုပြီးလက်တွဲဖို့ မသင့်တော်တဲ့ မောင်နှံလေးတွေ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဓမ္မာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ အတွဲလေးတွေ လက်ထပ်မိရင် … Read more
ယောကျာ်းလေးတွေ လုံးဝမကြိုက်ပဲ ဝေးဝေးရှောင်တတ်ကြတဲ့ မိန်းကလေးပုံစံ(၅)မျိုး
ယောကျားလေးအများစုက မိန်းကလေးတွေလောက် ဂျီးမများတတ်ကြဘူးဆိုပေမယ့် သူတို့လက်တွဲမယ့် ချစ်သူကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့ သေချာလေး စဉ်းစားတတ်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ ယောကျာ်းလေးတွေဟာလည်း သူတို့ချစ်သူကို အကောင်းဆုံးသူပဲဖြစ်ချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ယောကျာ်းလေးတွေ လုံးဝသဘောမကျတတ်ကြပဲ အဝေးကိုထွက်သွားမိတတ်ကြတဲ့ ကောင်မလေးပုံစံမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ သူ အမြဲလိုလို စိတ်မချဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးမျိုး၊ အမြဲလိုလို ဒရာမာတွေ ခင်းလွန်းပြီး သူတို့ကိုသူတို့ ယုံကြည်မှုအားနည်းပုံပေါက်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို ယောကျာ်းလေးတွေက လုံးဝသဘောမကျတတ်ကြပါဘူးနော်။ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေက သူတို့ကို စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်တဲ့ အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပါ ယူဆောင်လာကြလို့ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေရဲ့ အဝေးမှာ နေလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကလေးထိန်းနဲ့တူတဲ့ သူ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က ချစ်သူထားတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ကောင်မလေးကို ချစ်သူပုံစံမျိုးလေးပဲ လိုချင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ သူတို့ကို ကလေးလေးတစ်ယောက်လို နေရာတကာ လိုက်ထိန်းပေးနေတတ်တဲ့သူ၊ တစ်ချိန်လုံး … Read more